မီနူးမှာနေရင်း စားချင်စိတ်ကို မထိန်း နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်နေမှန်း သိ သွားလို့ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ် သွား တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – XB Media Myanmar
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. အခုလက်ရှိမှာလူမှုကွန်ရက် ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေကြားမှာ နာ မည်ကျော်ကြားပြီးလူကြိုက်များနေတဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိတ် သတ်တွေအထိပါ အောင်မြင်မှုတွေကို တစ်ခဲနက်ရရှိထားတာပဲဖစ်ပါတယ်နော်။
ပိုင်တံ ခွန်ဟာ ဆိုရင် ရှည်လျားပြီးကြည့်ောင်းလွန်းတဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ တောင်းတင်းကျစ် လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လို ခန့်ညားချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် မိန်း ကလေးပရိတ်သတ်တွေကြားရေပန်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်….။
ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် ဖြူစင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ သဒ္ဒါတရားတွေ ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကလည်းဝန်းရံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်က လူမှုဆက်ဆ့ရေး အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ကောင်းမွန်ပြေပြစ်တာဖြစ်ပြီး အလုပ်အပေါ်မှာလည်း ဂရုတစိုက် ကြိုး ကြိုး စားစားလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေကို များစွာရရှိနေတာဆိုရင် လည်းမမှားပါဘူးနော်။လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေတတါတဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ ယနေ့မှာဆိုရင်လည်း ဆေးအကြီးကြီးထိုးတာကိုခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါဟာဆိုရင် ပိုင်တံခွန်က ညမိုးချုပ်ကြီးဗိုက်ဆာတာကြောင့် ဖုန်းမီးလေးဖွင့်ပြီး မီနူးမှာနေခဲ့ တာပဲဖစ်ပါတယ်။ မီးနူးမှာနေရင်း လျှာလေးထုတ်ကာ သရေကျပြီးစားချင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ပုံကိုဗီဒီ ယိုရိုက်မှန်သိလို့ ၇ှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ဆက်မှာနေခဲ့တာပဲဖစ်ပါတယ်။
ကလေးလေးတစ်ယောက်လို အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ပုံစံလေးက ပရိတ်သတ်ကို အချစ် ပိုစေခဲ့တာဖြစ်လို့ အဆိုပါဗီဒီယိုလေးကို ပရိတ်သတ်တွေထံ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ဖ တ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်….။
source :Paing Takhon ‘s FB account
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…. အခုလက္ရွိမွာလူမႈကြန္ရက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳသူေ တြၾ ကားမွာ နာ မည္ေက်ာ္ၾကားၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ မင္းသားေခ်ာ ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက ပရိတ္ သတ္ေတြအထိပါ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို တစ္ခဲနက္ရ ရွိ ထားတာပဲဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ပိုင္တံ ခြန္ဟာ ဆိုရင္ ရွည္လ်ားၿပီးၾကည့္ောင္းလြန္းတဲ့ အရပ္အေမာင္းနဲ႔ ေတာင္းတ င္းက်စ္ လစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္လို ခန႔္ ညားေ ခ်ာေမာတဲ့ ႐ုပ္ရည္ေၾကာင့္ မိန္း ကေလးပရိတ္သတ္ေတြၾကားေ ရပန္း စားေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္….။
ပိုင္တံခြန္ဟာဆိုရင္ ျဖဴစင္မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ အလႉအတန္းရက္ေရာတဲ့ သဒၵါတရားေ တြ ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြကလည္းဝန္းရံေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္က လူမႈဆက္ဆ့ေရး အပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္တာျဖစ္ၿပီး အလု ပ္အေ ပၚမွာလည္း ဂ႐ုတစိုက္ ႀကိဳး ႀကိဳး စားစားလုပ္ကိုင္ေနတာေၾကာင့္ အခုလိုေအာ င္ျမင္မႈေတြကို မ်ားစြာရရွိေနတာဆိုရင္ လည္းမမွားပါဘူးေနာ္။လြတ္လပ္ေ ပ်ာ္ ႐ႊင္စြာေနတတါတဲ့ ပိုင္တံခြန္ဟာ ယေန႔မွာဆိုရင္လည္း ေဆးအႀကီးႀကီးထိုးတာကို ခံလို က္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒါဟာဆိုရင္ ပိုင္တံခြန္က ညမိုးခ်ဳပ္ႀကီးဗိုက္ဆာတာေၾကာင့္ ဖုန္းမီးေလးဖြင့္ၿပီးမီႏူး မွာေနခဲ့ တာပဲဖစ္ပါတယ္။ မီးႏူးမွာေနရင္း လွ်ာေလးထုတ္ကာ သေရက်ၿပီးစားခ် င္ေ နတဲ့ သူ႔ရဲ႕ပုံကိုဗီဒီ ယို႐ိုက္မွန္သိလို႔ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေလးငုံ ႔ကာ ဆ က္မွာေနခဲ့တာပဲဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ပုံစံေလးက ပရိတ္သတ္ကို အခ်စ္ ပိုေစ ခဲ့တာျဖစ္လို႔ အဆိုပါဗီဒီယိုေလးကို ပရိတ္သတ္ေတြထံ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေ နာ္…။ဖ တ္ရႈေပးတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္….။